ZedCoins စျေး - အွန်လိုင်း ZED ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို ZedCoins (ZED)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ ZedCoins (ZED) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ ZedCoins ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ ZedCoins တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
ZedCoins များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
ZedCoinsZED သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$1.63ZedCoinsZED သို့ ယူရိုEUR€1.37ZedCoinsZED သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£1.24ZedCoinsZED သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.1.48ZedCoinsZED သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr14.62ZedCoinsZED သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.10.21ZedCoinsZED သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč36.08ZedCoinsZED သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł6.06ZedCoinsZED သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$2.16ZedCoinsZED သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$2.25ZedCoinsZED သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$36.47ZedCoinsZED သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$12.62ZedCoinsZED သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$8.72ZedCoinsZED သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹122.08ZedCoinsZED သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.274.68ZedCoinsZED သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$2.23ZedCoinsZED သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$2.44ZedCoinsZED သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿50.68ZedCoinsZED သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥11.32ZedCoinsZED သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥171.78ZedCoinsZED သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1929.76ZedCoinsZED သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦619.71ZedCoinsZED သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽119.53ZedCoinsZED သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴45.13
ZedCoinsZED သို့ BitcoinBTC0.000138 ZedCoinsZED သို့ EthereumETH0.00412 ZedCoinsZED သို့ LitecoinLTC0.0273 ZedCoinsZED သို့ DigitalCashDASH0.0161 ZedCoinsZED သို့ MoneroXMR0.0174 ZedCoinsZED သို့ NxtNXT115.46 ZedCoinsZED သို့ Ethereum ClassicETC0.227 ZedCoinsZED သို့ DogecoinDOGE461.38 ZedCoinsZED သို့ ZCashZEC0.0164 ZedCoinsZED သို့ BitsharesBTS62.36 ZedCoinsZED သို့ DigiByteDGB59.84 ZedCoinsZED သို့ RippleXRP5.29 ZedCoinsZED သို့ BitcoinDarkBTCD0.0549 ZedCoinsZED သို့ PeerCoinPPC5.6 ZedCoinsZED သို့ CraigsCoinCRAIG725.31 ZedCoinsZED သို့ BitstakeXBS67.88 ZedCoinsZED သို့ PayCoinXPY27.79 ZedCoinsZED သို့ ProsperCoinPRC199.14 ZedCoinsZED သို့ YbCoinYBC0.000853 ZedCoinsZED သို့ DarkKushDANK510.39 ZedCoinsZED သို့ GiveCoinGIVE3445.31 ZedCoinsZED သို့ KoboCoinKOBO357.26 ZedCoinsZED သို့ DarkTokenDT1.5 ZedCoinsZED သို့ CETUS CoinCETI4593.6